★မြန်မာ့အလင်း★: တာဝန်မဲ့သူများကြည့်ရန် : Poles protest the building ofaMosque which was funded by Saudi Arabia.
တာဝန်မဲ့သူများကြည့်ရန် : Poles protest the building ofaMosque which was funded by Saudi Arabia.
မြန်မာတွေကိုပဲ အရေးယူတယ်.. ပြစ်ဒဏ်ပေးတယ်ဆိုတာမျိုးလုပ်နေပြီး ကုလားကို ဘာမှ မလုပ်ဘူးဆိုရင် ကျုပ်တို့ မြန်မာမျိုးချစ်တွေက ဘယ်လို မြင်လာမလဲဆိုတာ နည်းနည်းတော့စဉ်းစားပါ။ ဖြောင့်မတ်တဲ့ စိတ်ထားခင်ဗျားတို့မှာ မရှိရင် အားပေးထောက်ခံတဲ့သူတွေ နည်းသွားလိမ့်မယ်။ ဘာသာရေးနဲ့ နိုင်ငံရေး မပတ်သက်ဘူးဆိုတာ လက်ခံရင်.. ပလီဆရာတွေနဲ့ မွတ်ဆလင်အဖွဲ့တွေ နိုင်ငံရေးမှာ ပတ်သက်နေတာကို ဆန့်ကျင်ပေးကြပါ။ ထပ်မေးချင်ပါတယ်. . . နအဖ လက်ကိုင်ဒုတ် ပလီဆရာတွေနဲ့ မွတ်ဆလင် အသင်းအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ သားသမီးတွေကို ဘယ်တော့ အနောက်ဖက်ကနေ နှင်ထုတ်ဖို့ လှုပ်ရှားမှု စတင်မလဲဆိုတာ ဖြေပေးကြပါ။ ဒီမိုဘလော့ပိုင်ရှင်ဆိုရင်တွေလဲ . . နအဖနဲ့ ပေါင်းသင်းနေတဲ့ ကုလားတွေကို ဆန့်ကျင် ရှုံ့ချမှုကို ဘယ်တော့ စတင်ပြီးလုပ်မလဲဆိုတာ ဖြေပေးပါ။
မင်းတို့စဉ်းစားကြည့်နော်. . နအဖ ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့ ပတ်သက်နေတဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေကို စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့တာတွေလုပ်တယ်။ အနောက်ဖက်နိုင်ငံတွေမှာ ရှိနေတဲ့ သူတို့ရဲ့ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကို နည်းပေါင်းစုံနဲ့ စိတ်အနှောင့်အယှက် ပေးကြတယ်။ ဗီဇာတွေကို ပိတ်ပင်တယ်။ ကျောင်းတက်နေသူတွေကို အတင်းပြန်ပို့တယ်။ အနုပညာရှင်တွေကိုလည်း ဗီဇာ ပိတ်တယ်ကွာ။ စစ်အဏာရှင်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့သူတွေကို အဲလို အပြစ်ပေးတာကို ငါက နားလည်တဲ့အပြင် ထောက်ခံခဲ့တာ အားလုံးသိပါတယ်။
အခုဆိုရင် ပလီဆရာတွေနဲ့ မွတ်ဆလင်အသင်းတွေက ပလီဆောက်ခွင့်နဲ့ တခြားအခွင့်အရေးတွေကို နအဖဆီကတောင်းပြီး အပြန်အလှန်အဖြစ် ရွေးကောက်ပွဲကို ထောက်ခံတယ်။ အဲဒီကုလားတွေက ငါတို့မြန်မာတွေကို စစ်ကျွန်ဘ၀ကို သက်ဆိုးရှည်အောင်လုပ်ပေးနေတာကွ။ ဦးခင်မောင်ဆွေဆိုလို ထောင်ထဲမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ဘ၀ကို စတေးခဲ့သူကိုတောင် စစ်ကျွန်သက်ရှည်အောင်လုပ်ရင် အားမနာတမ်း ဝေဖန် အပြစ်တင်ကြတယ် မဟုတ်လား? ဘာဖြစ်လို့ ပလီဆရာတွေနဲ့ မွတ်ဆလင်အဖွဲ့တွေကို ဒီမိုတွေက ဝေဖန်.. အပြစ်ဖို့ လက်ရွံ့နေတာလဲ? ကိုယ့်အိမ်မှာ ခိုကပ်နေတဲ့ ကုလားတွေကို ကြောက်လို့လား? ငါနားမလည်တဲ့ အပိုင်းရှိရင်.. ရှင်းပြပေးပါလား။ ဒီမိုဘက်တော်သား အမည်ခံထားတဲ့ ကုလားတွေကလည်း.. . ပလီဆရာတွေနဲ့ မွတ်ဆလင်အဖွဲ့တွေလုပ်ရပ်ကို နှာစေးနေတယ်နော်။